NMDUSU ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ NMDC Virtual Student Forum ရဲ့ တတိယရက်ဖြစ်တဲ့ Workshop အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးခြင်း – NMDC
NMDUSU ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ NMDC Virtual Student Forum ရဲ့ တတိယရက်ဖြစ်တဲ့ Workshop အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးခြင်း
By NMDC Editor Uncategorized Comments Off on NMDUSU ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ NMDC Virtual Student Forum ရဲ့ တတိယရက်ဖြစ်တဲ့ Workshop အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးခြင်း
NMDCer လေးများ အားလုံးမင်္ဂလာပါ
NMDUSU ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ NMDC Virtual Student Forum ရဲ့ တတိယရက်ဖြစ်တဲ့ Workshop အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
Facilitators တွေကို မိတ်ဆက်မပေးခင် Day3ရဲ့ ပြုလုပ်သွားမယ့်ပုံစံလေးကို ဦးစွာ ပြန်လည်ရှင်းပြလိုပါတယ်။
Day3မှာတော့ ZOOM Platform ကို အသုံးပြုပြီး NMDC ကျောင်းသားကျောင်းသားများ ပါဝင်ဆွေးနွေးရမယ့် Breakout Sessions ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မတူညီတဲ့ “ခေါင်းစဉ်လေးခုနဲ့ Workshop လေးခု” တစ်ပြိုင်နက်ရှိမှာ ဖြစ်ပြီး မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ Workshop နှစ်ခု (မနက်တစ်ခု၊ ညနေတစ်ခု) တက်ရောက်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Workshop တစ်ခုကို အယောက် ၅၀ နှုန်းနဲ့ စုစုပေါင်း အယောက် (၂၀၀) ပါဝင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး Certificate လဲ ပေးအပ်သွားမှာပါ။ Breakout Sessions အတွက် Registration ကို မကြာခင်မှာ လက်ခံသွားမှာပါ။
လူဦးရေကန့်သတ်ထားတာမို့ မြန်မြန် register ဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
#NMDC #NMDCSU #Virtual_Student_Forum #CareerAspirations #Covid19 #PostCovid #Workshop #KeynoteSpeech #PanelDiscussion
𝐄𝐋𝐈 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥𝐬 𝐁𝐨𝐨𝐭 𝐂𝐚𝐦𝐩 𝐑𝐨𝐮𝐧𝐝 𝟐
အားလုံးရဲ့ အရှေ့ကို ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံရောက်ရှိလာတဲ့ ELI World Youth Skills Boot Camp ပထမအကြိမ်မှာ ကချင်ပြည်နယ်အတွက် သီးသန့်အနေနဲ့ လူငယ် ၂၀၀၀ ကိုသာ ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် အားလုံးရဲ့ တောင်းဆိုချက်အရ MYEO [...]
စာနယ်ဇင်းအတတ္ပညာဆိုတာကဘာလဲ? သင်ဘယ်လိုစာနယ်ဇင်းအတတ္ပညာအကြောင်းကိုနားလည်ပါသလဲ? သငျသညျသတင်းစာပညာဘာသာရပ္အကြောင်းကိုသိလိုပါသလား? သင်မီဒီယာလယ်ပြင်၌ကြိုက်နှစ်သက်မယ့်သတင်းစာဆရာသို့မဟုတ်တစ်ခုခုဖြစ်လိုလျှင်, သင်သည်ဤဗီဒီယိုအားစောင့်ကြည့်ရပေမည်။ https://youtu.be/GBlD1tBne74
အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ် (National Management Degree College) ၏ နှစ်စဉ်ကျင်းပနေကျ ပွဲတွေထဲက ပညာရေးဆိုင်ရာ ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ NMDC Open Campus 2019: A Promising Future ဆိုတဲ့ Education [...]
“𝙒𝙤𝙧𝙠𝙨𝙝𝙤𝙥 𝙖𝙣𝙙 𝙁𝙖𝙘𝙞𝙡𝙞𝙩𝙖𝙩𝙤𝙧𝙨 𝘼𝙣𝙣𝙤𝙪𝙣𝙘𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩”
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ဒီနေ့မှာတော့ NMDC Student Union နဲ့ Journalism Student Association(JSA) တို့အတူ ပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖော်ထားတဲ့ “NMDC Virtual Student Forum 2.0” Journalism week [...]
DTSM အမှတ်စဉ်(၁၃)၀င်ခွင့်ဖြေဆိုမည့် အစီအစဉ်